Xplora X5 Gwuo smartwatch maka ụmụntakịrị | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | 02/04/2021 16:00 | Emelitere ka 27/03/2021 18:32 | General, Nyocha
Mobile na nkà na ụzụ nwere ọgụgụ isi, ma ha bụ ekwentị ma ọ bụ ụdị ọ bụla nke ejikọrọ, bụ ihe nke ọdụdụ nke ezinụlọ metụtara kemgbe mmalite ya, agbanyeghị, a ka nwere usoro ngwaọrụ dịka Wearables nke ahụ na-enye ọrụ na-atọ ụtọ n'akụkụ a nke anyị nwere ike ịnye ntakịrị ọkwa.
Ka anyị leba anya n’otú X5 Play a nwere ike isi nye aka weta nnwere onwe na nchekwa nye ụmụntakịrị nọ n’ụlọ ahụ, na otu o nwere ike isi rite uru nke ọrụ ya kwa ụbọchị.
Dị ka ọ na-eme n'ọtụtụ oge ndị ọzọ, anyị kpebiri iso ihe nyocha miri emi nke vidiyo na ọwa YouTube anyị nke anyị ga-akuziri gị ịbupu ngwa ngwa ka ị nwee ike ịlele ọdịnaya nke igbe ahụ yana otu ngwaọrụ si dị nso. , yana obere nkuzi anyị ga - egosi gị otu ị ga - esi hazie gị Xplora X5 Gwuo iji kwadebe ya mgbe ị na-enye ya ụmụntakịrị nọ n’ụlọ. Were ohere ịdenye aha na chanel anyị ma hapụ anyị ajụjụ ọ bụla na igbe igbe.
3 Nkwurịta okwu na nhazi obodo
4 Goplay: Mee ka ọ megharịa
Dịka ngwaahịa emere maka ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ ọ bụ, anyị na-achọta rọba rọba dị ka isi ihe. Nke a ga - adị mma maka ebum n’uche abụọ, nke mbụ bụ na ọ ga - egbochi ụmụ ntakịrị ka ha jiri ya merụọ onwe ha ahụ, n’otu ụzọ ahụ ọ ga - esi mee ka ọ bụrụ ngwaahịa na - eguzogide ọgwụ. Na isi, a na-enye ngwaọrụ ahụ na agba ojii, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịhọrọ mkpụbelata nke na-eso ya n'etiti acha anụnụ anụnụ, pink na oji, yana obere nkọwa ndị ọzọ gbasara eriri silicone nke ọ gụnyere na nke dị mfe iji dochie ya.
Akụkụ: X x 48,5 45 15 mm
Ibu ibu: 54 grams
Agba: Black, pink na-acha anụnụ anụnụ
Ọ dị ntakịrị obere maka nwa ọhụrụ nke nwere naanị 54 gram, ọ bụ ezie nha igbe ahụ na akụkụ ya niile nwere ike iyi nnukwu. Anyị nwekwara asambodo IP68 nke ga - ekwe nkwa na ha nwere ike ịmaba ya, gbachapụ ya na ọtụtụ ihe na - atụghị ụjọ ịmebi ya. N'ụzọ doro anya, Xplora na akwụkwọ ikike ya anaghị elekọta mmebi mmiri, ọ bụ ezie na nke a ekwesịghị ịbụ nsogbu.
N'ime elekere a na-achọsi ike nhazi ahụ na-ezo Omuma 8909W raara nye wearables, na-agba ọsọ nke omenala android ya na ohere inweta 4G na 3G netwọk ekele oghere SIM kaadị na-gụnyere na ngwaọrụ. N'ime ya nwere ikike nchekwa 4GB, Ọ bụ ezie na anyị enweghị data akọwapụtara gbasara RAM, anyị chere maka ịrụ ọrụ nke ọrụ ya, ọ ga-abanye gburugburu 1GB. Na nke a, anyị enwebeghị mkpesa ọ bụla, dị ka ị hụworo na vidiyo.
Ihuenyo: 1,4 sentimita
Mkpebi ngosipụta: 240 x 240 pikselụ
Igwefoto integrated 2MP
Maka batrị anyị nwere 800 mAh na mkpokọta nke ga-enye ụbọchị iji ọkọlọtọ ma ọ bụrụ na anyị rụọ ọrụ bụ isi arụmọrụ. Otú ọ dị, site na iji ngwaọrụ ahụ na ọnọdụ nkwụnye ikike ọ ga-enwe ike inye anyị ụbọchị atọ eji dị ka ule anyị.
Nkwurịta okwu na nhazi obodo
Elekere nwere usoro GPS agbakwunyere site na njikọta data mkpanaka, n'ihi na nke a na iji ngwa maka gam akporo na iOS. A ga-egosiputa ọnọdụ nwa ahụ n'oge, anyị nwekwara ohere ịmepe «Ebe nchekwa», ụfọdụ ebe ndị ahaziri iche ga-enye ọkwa na ekwentị mgbe onye ọrụ batara ma ọ bụ hapụ ha.
Akụkụ a jikọrọ ya na nke nkwukọrịta, dịka anyị kwuworo, elekere a nwere onwe ya kpamkpam ma ọ bụrụ na anyị ekenye ya kaadị sim Onye ọ bụla nwere data ma na-akpọ mmekọrịta ga-eme ka anyị nwee ike ịkpọtụrụ obere ya ngwa ngwa na nchekwa. Anyị nwere ike ịgbakwunye karịa kọntaktị ikike 50 nke gị na onye ị nwere ike ịkpọtụrụ site na oku site na ihuenyo mmetụ gị. O doro anya na anyị nwekwara ike ịgụ ozi ederede na emojis ahaziri iche na X5 Play.
Ngwa ahụ yiri ihe ịga nke ọma, arụmọrụ ahụ dị ezigbo mmiri ma tinyekwa ya n'ụzọ ziri ezi na sistemụ arụmọrụ dị iche iche, ọ bụ ezie na anyị achọtala ma eleghị anya arụmọrụ dị elu karịa na iOS. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime isi ihe kpatara iji nweta ngwaọrụ ahụ, ebe ọ bụ na ọ bụ etiti akwara ya ọ bụ ezie na elekere ahụ enweghị onwe ya.
Goplay: Mee ka ọ megharịa
Xplora na-agụnye n'ime ọgbọ ọhụrụ ya na-elele ikpo okwu mmemme a na-akpọ Egwuregwu. Enweela usoro ihe ndekọ na mmemme a na Europe, na-ebute ya ọkachasị maka mmekorita ya na Sony PlayStation. Mụntakịrị ga-enwe ike ime ihe ịma aka ha ma si otú ahụ nweta ụgwọ ọrụ.
Xplora App maka iOS.
Xplora App maka gam akporo.
Nke a ga-enyere ha aka, ma ọ bụrụhaala na anyị nyere ha aka na usoro a ma nabata ụzọ ahụ, iji lụsoo omume ịnọ otu ebe ọgụ.
Ihe kachasị amasị anyị bụ na elekere ahụ gụnyere igwefoto 2MP, Nke a ga - enyere nwata ahụ aka ịse foto na - adọrọ mmasị ma gị onwe gị, site na ntanetị dị ichi, werekwa ụfọdụ gbaa.
Njikwa nne na nna nwere ọnọdụ kachasị na ngwanrọ niile gụnyere ngwaọrụ ahụ ma nke a dị ezigbo mkpa. Elekere a na-enyere ụmụntakịrị aka dị ka ụzọ izizi ekike, n'otu ụzọ ahụ ha si nye anyị ohere ileba anya n'ihe ha na-eme, ma na nchekwa na mgbe anyị na-alụ ọgụ ịnọkarị otu ụmụaka, ihe otiti dị mkpa na ụmụaka. Oge na-agba ọsọ. O doro anya na site na ụbọchị, Nke a X5 Play na-positioned dị ka ihe na-akpali mmasị karịsịa ngwaahịa maka udo, na-echebara afọ dị iche iche nke ngwaahịa na atụmatụ enyere.
Ugbu a, anyị na-ekwu maka ihe dị mkpa, Xplora X5 ahụ nwere ike zụrụ na nwere ika website si 169,99 euro, a pụtara agafeghị oke price nyere atụmatụ awa.
Ihe na: 2 April 2021
Ngwa Xplora dị ezigbo mma
Echere nke ọma maka njikwa ndị nne na nna
Obere ihe siri ike na nha
Adighi mfe iji melite
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Xplora X5 Kpoo smartwatch maka umuaka